Ny vokatra izay manompo ny fahasalaman'ny mponina. Araka ny filazan'ny OMS, ireo vokatra ireo dia tokony ho "amin'ny fotoana rehetra, amin'ny habetsaky ny habetsahana, amin'ny endrika fatra mety, miaraka amin'ny fampahalalana azo antoka sy ampy, ary amin'ny vidiny azon'ny tsirairay sy ny vondron'olona".
Amerikanina amerikanina 8mm
Ny clamp amin'ny karazana bay
Ny fametahana fantsona dia azo arahana araka ny sarin'ny mpanjifa.
Ny singa manindrona isan-karazany dia azo arahana araka ny sarin'ny mpanjifa.
Ity clamp ity dia manana bandwidths 20mm sy 32mm.Ireo dia misy vy vita amin'ny vy ary fitaovana 304 daholo.
Famotsoran-tsakaoka tsy miandalana amin'ny Uniaural
Ny vokatra iraaural non-polar hose dia vokatra 304 fotsiny ihany, izay manome fanoherana tsara kokoa, lanja maivana ary fametrahana mora.
Alohan'ny hametrahana ny fifohazana U-mofomamy amin'ny takelaka lasantsy, mba hamaritana tsara kokoa ny làlan'ny clamp dia ilaina ny manisy marika ilay toerana fanamboarana aloha, avy eo dia mandoto hasiana tombo-kase, ary ampidiro ny tapany ambany amin'ny vatana fantsakan'ny fantsona. ary napetaka tamin'ny fantsona, napetaho ny antsasaky ny fantsona fantsony sy sarony, ary atero miaraka amin'ny kirikety. Aza adino ny manantona mivantana ny takelaka ambany amin'ny hidona fantsona.
Famoriam-be torotoro, ny lalamby fitarihana dia azo harodana eny amin'ny fototra, na raikitra amin'ny kiraro.
Apetaho aloha ny vatan-dohazo marika ambony sy ambany izay apetaho, apetaho ny fantsona, avy eo apetaho ny vatom-baravarana antsasaky ny tapany ambony, amboary miaraka amin'ny screws, amin'ny alàlan'ny saronana hidin-trano mba hisorohana azy amin'ny fihodinana.
Fampitaovana (ho fanamboarana clamp)
Ny akora dia ampiasaina indrindra amin'ny fanamboarana fantsona, hosotra ary tariby.
Ny clamp Mini dia manana hery fanamafisana maharitra ho an'ny fametrahana mora ary mety ho an'ny hose-rindrina manjelanjelatra manjavozavo mihoatra ireo mpanongom-bolo.
Mavesatra fantsona mavesatra vy
Ny fantsona mavesatra mavesatra amin'ny vy matevina dia clamp manokana amin'ny fanamboarana fantson-jaza voahemotra.
Fametahana hose dobel roa
Azo fangatahana roa ny kitapo hose. Ny diameter tariby dia hafa noho ny habeny. Ny habeny tsy voatanisa ao anaty latabatra dia azo zahana.
Fampandrenesana avo roa heny dia vita amin'ny fantsom-by vy vita amin'ny kalitao avo lenta, ary ny atiny dia voatsabo amin'ny alàlan'ny zinc.Compact kalitao avo lenta ary ny hazavana maivana dia ilaina ny fivorian'ny caliper.
Famenon'ny hose amin'ny tetezana
Ny fametahana hose amin'ny tetezana dia natao manokana ho an'ny lakolosy, ny kodiarana mihodina amin'ny ankavia sy havanana mba hahafahana mametaka ny karatra tonga lafatra amin'ny fantsona fantsona.Azy dia afaka mifandray amin'ny rakotra vovoka, varavarana fipoahana, mpampitambatra ary fitaovana hafa hananganana marim-pototra sy rafitra fanangonana vovoka matanjaka. Ny famolavolana tetezana dia mamela ny hery hiditra mivantana amin'ny hidina, mametraka mora ny hose mba hisisy tombo-kase azo antoka sy fifandraisana. Ny fanamboarana stainless vy ho an'ny mateza.